DFS waxay taageertaa isu soo dhawaanshaha Sacuudiga
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyay dadaalada lagu heshiisiinayo Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Qatar, oo xiriirkoodu xumaaday bishii Juun 2017, ka dib markii xukuumadda Riyaad ay ku eedeysay dhigeeda Doha inay taageerto waxa loogu yeeray argagixisada.
Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey hadalkii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuweyt ee lagu muujiyey natiijooyinka adag iyo guulaha siyaasadeed ee wadahadaladii muddada dheer socday
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa hadalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuweyt ee ku saabsan dadaalka miro dhalinta ah ee dib u heshiisiinta ee u dhexeeya Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Dowladda Qatar.” Sidaana waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Somalia.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay bogaadineysaa dadaalka dhexdhexaadinta ee Amiirkii hore ee Kuwait, Sheikh Sabah Ahmed Aljaabir, ee xalinta khilaafkan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa dadaalka Amiirka Kuwait, Amiir Nawaf Axmed Aljaabir, iyo hoggaamintiisa wada-xaajoodka lagu dhameystirayo soo celinta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo shucuubta iyo guud ahaan dalalka Khaliijka. ” Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go’an tahay inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la siman tahay dalalka Carabta, maadaama ay dhex-dhexaad ka noqotay go’doominta ay Qatar ku hayso dalalka Khaliijka, isla markaana diyaaradaha Qatar ay adeegsanayeen hawada Soomaaliya.
“Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa mar walba ka go’an xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku saleysan dhexdhexaadnimada, iskaashiga iyo ilaalinta xasilloonida iyo madax-bannaanida dhammaan daneeyayaasha.” ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya.
Cali Guudlaawe laga soo bilaabo waqtigii la doortay
Somalia welcomes Kuwait’s efforts to finish